Shanyira Bhutan Kubva kuBhubaneswar | Tititirei 993-702-7574 kuti Bhuku Ikozvino
Shanyira Bhutan - Mufaro nzvimbo
Kuchengetedza ruvara rwechimiro icho chaicho chaicho chakarohwa? Shanyira Bhutan Kubva kuBhubaneswar, neSande Mabhuru! Hazvina mhosva zuva racho, nguva, gore raunosvika pano - Iwe unogona kuva nenguva yakanakisisa yehupenyu hwako.
Umambo hweHimalaya huri kurarama huri maererano nezvinokosha zvekare uye tsika uye inyika yechakavanzika nemashiripiti, uko pasi rinosangana nedenga. Kubva kuRalal-capped mountain ranges uye kushamisa mhuka dzesango, kunaka kune zvisikwa zvinopa pano kuchakupa chiitiko chisingakanganwiki paunoshanyira Bhutan Kubva Bhubaneswar, kuti iwe uchakoshesa hupenyu hwose.
Tinokupa iwe mapurisa akaisvonaka ekushanyira Bhutan Kubva kuBhubaneswar iyo inofanidza zvido zvako, zvaunofarira uye bhajeti. Saka, gadzirira kugwa murudo nevekupedzisira yeHumalayan Kingdom pasi pano !!!
Paro - Thimphu - Punakha (05 Nights Program | Puro Code: 1017):
ZUVA 01: Svika Paro NaDruk Air & Kuenda kune Thimpu (55Km, Approx.1.1 / 2 Hours Drive)
Kuenda kuParo ndechimwe chezvinhu zvinonakidza muHimalaya yose. Pasinei nekubhururuka nechepamusoro peHitalaya kubva kuK Kathmandu kana pamusoro pemakiromita kubva kuKolkata, rwendo runopa maonero anofadza uye kubva kunofadza kupinda muUmambo. Chipo chekutanga cheBhutan apo iwe uchiburuka kubva mundiza ichava yakanakira, yakachena yakachena mumakomo. Mushure mokunge mushure mokuenda kune dzimwe nyika uye kutakura mitoro, muchasangana nemumiririri wedu, uye mushure mokutamira kuenda kuThimphu, guta guru reBhutan ne-en-route kumisangano kuChuzom, kutunganidzwa kweThimphu uye Paro nzizi. Nzira zvitatu dzakasiyana dzemakumbo; Tibetan, Nepalese uye Bhutanese vanogadzira iyi confluence.
Paanosvika, in Thimphu chengetera-muhotera. Guta guru reBhutan uye pakati pehurumende, chitendero uye zvekutengeserana, Thimphu iguta rakasiyana nedzimwe kusanganisa kwemazuva ano kubudirira pamwe chete netsika dzekare. Nehuwandu hwevanhu vane 90,000 ndiyo inenge iine hurumende chete yeguta risina chiedza chekufamba.
Manheru evanhu vanofamba vachifamba-famba vachitenderera Thimphu main street uye misika.
Usiku huno pahotera kuThimphu. (Kureba 2,320 m)
ZUVA 02: Thimpu
Mushure mokudya kwekudya chamangwanani, enda kuBuddha Point (KuenselPhodrang). Iri pedyo nechiteshi chiduku kubva kuThimphu nechepakati peguta, vashanyi vanogona kuwana mufananidzo wakaisvonaka weTimphu mupata kubva kuBuddha point (KuenselPhodrang). Iwe unogona kubhadhara kunamata kwako uye kupa minyengetero kuna Buddha, iyo mifananidzo yakawanda munyika uye wofamba-famba uye unotora maziso emupata.
Zvadaro, shanyira Chirangaridzo chaMambo chaChorten chichienderera mberi chichienderedzwa nevanhu, kugunun'una mantras uye kusunungura minyengetero yavo yemakumbo. Kuvakwa kwechiratidzo ichi chaiva pfungwa yechitatu yeBhutan, Mambo Wake Jigme Dorji Wangchuk ("baba vezvino zemaBhutan") avo vaida kuisa chikumbaridzo kune rugare rwepasi nekubudirira. Yapedzerwa muna 1974 mushure mokufa kwake kusina nguva, inoshumira sechiyeuchidzo kuna Late King uye sechitubu chekuita rugare.
Mushure mokushanyira kuTextile uye Folk Museum Museums, uchapupu hunofadza hwemitemo yeBhutanese.
Itai mapepa emasikati, shanyirai National Library, muve nekawanda yakawanda yezvinyorwa zveBuddhist zvisinganyanyi kukosha uye Institute for ZorigChusum (inowanzozivikanwa sePainting School) apo vadzidzi vanopinda mukana wekudzidzira gore re6 muBhutan's 13 neyanzvi hwemagariro nemishonga.
Zvadaro, fambisa kunotora kuchengetedza. The Takin imhuka yemarudzi yeBhutan, uye inoratidzika somupande pakati pemombe nembudzi.
Gare gare masikati kushanyira Trashichhoedzong, "nhare yechitendero chinokudzwa". Iyi ndiyo nheyo yehurumende uye chitendero, nzvimbo yeumambo pachigaro chechigaro uye chigaro chaJe Khenpo kana Chief Abbot. Yakavakwa mu1641 nehutongerwo hwezvematongerwo enyika uye hwechitendero hweBhutan, Shabdrung Ngawang Namgyal, yakadzorerwa muC1960 nenzira yekutenderera yeBhutanese, isina misumari kana zvirongwa zvekugadzira.
Nguva yemanheru inogona kushandiswa ichifambisa kuburikidza nehurumende-Run Handrafts Emporium uye musha wezvesa bazaar, kutarisa kuburikidza nemuenzaniso wehutano hwakanaka hwetsika dzeBhutan. Pano unogona kutenga zvigadzirwa zvemaoko, zvigadzirwa zvepangha, masikisi, keramiki, slate uye matanda akavezwa, zvishongo, zvinhu zvinonakidza zvakagadzirwa kubva munzvimbo dzomunzvimbo.
ZUVA 03: Thimpu - Punakha & Wangduephodrang (75 Km, Approx. 3Hours Drive)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, fambai kuenda kuPunakha / Wangduephodrang kudarika Dochu La.Iyo iri panzvimbo yakakwirira ye3,088m / 10,130 ft, ​​Dochula inzvimbo yakakurumbira uye yakarongedzwa, rusvingo rwekunamatira, uye minyengetero dzemapuranga zvinoshongedza iyo nzvimbo yakakwirira mumugwagwa. Kana matenga akajeka, zvingave zvichibvira kuona zvikwiriso zvinotevera kubva paya iri kurongwa kubva kuruboshwe zvichienda kurudyi: Masagang (7,158m), Tsendagang (6,960m), Terigang (7,060m), Jejegangphugang (7,158 m), Kangphugang (7,170 m) , Zongphugang (7, 060 m), gomo refurafura rinotonga nzvimbo iri kure yeLunana - pakupedzisira Gangkar puensum, iyo yakakwirira kupfuura yose muBhutan ku7,497m.
Masikati anoshanyira Punakha Dzong kana (Palace of Great Happiness), yakavakwa muna 1637 neShabdrung Ngawang Namgyal, pamaganho eFochu naMochu. Izvi zvinoshamisa dzong zvakashanda sezvose zvechitendero uye nehutungamiri hweBhutan munguva yakapfuura. Inoyera imwe 600 ne 240 tsoka uye ine nhurikidzwa nhatu, nhare yegoridhe. Mkati maiva mabheti uye zvinyorwa zvechitendero izvo zvinoreva pahupamhi hwehupenyu uye tsika dzekunamata dziri pano. Mutungamiri wako achajekesa kunzwisisa kwako kwechimiro chakakosha icho chisinganzwisisiki kwatiri, kunyange kwenguva refu yakasimbiswa pano.
Gare gare pazuva rekuenda kuChimi Lhakhang.
Iyo Chimi Lhakhang, iyo iri pamusoro pekoko mumupata wepamupata, inozivikanwawo se temberi yekubereka. Inonyanya kutendwa kuti vakaroorana vasina vana uye vanoda, kana vakanyengetera patemberi iyi, vanowanzokomborerwa nevana munguva pfupi. Kufamba mumusha uri pedyo netemberi kunokupa zvishoma zvishoma muupenyu hwezuva nezuva uye mararamiro evanhu vomunharaunda.
Usiku huno pahotera muPunakha / Wangduephodrang. (Kureba 1,300m)
ZUVA 04: Punakha & Wangduephodrang - Paro (125 Kms, Approx 4.1 / 2Hours Drive)
Mushure mokudya kwekudya mushure mokumhanya kudzokera kuParo ichiburuka kubva pasi kubva kuDhumhu La, tevera nzira yekudzoka kunoshamisa kweEng Ch Ch uye ParoChuhu mipata yemvura, vasati vayambuka nepakati peParo musha kusvika kumucheto kuchamhembe kwemupata.
Painoshanyira SimtokhaDzong, imwe yenhare yakare yenyika uye inozivikanwa senzvimbo ye dzidziso yakanyanya tantric. Izvozvi dzonguva ino ine chikoro chekudzidza mutauro weZuzongkha.
Gare gare zuva rakatevera mushure mekuenda kuhotera, ramba uchishanyira Ta Dzong, pakutanga yavakwa seWatchtower, iyo zvino yava neNational Museum. Iyo yakawanda yakasanganiswa inosanganisira antique thangkha mapepa, machira, zvombo & zvombo, zvinhu zveimba uye kugadzirwa kwakapfuma kwezvinhu zvakasikwa uye zvezvakaitika kare.
Zvadaro famba mugwagwa kuti ushanyire RinpungDzong, zvinoreva ("nhare yemurwi wezvishongo"), iyo ine nhoroondo yakareba uye inofadza. Pamwe pamapuranga emapuranga akavhara ruvazhe rwomukati mune rusvingo rwakanaka hwekuveza mifananidzo yeBuddha yakadai seshamwari ina, mutana wehupenyu hurefu, gumbo roupenyu, zviitiko kubva muupenyu hweMilarepa, Gomo. Sumeru uye mamwe Mandala ane cosmic.
Usiku huno pahotera muParo. (Kureba 2,280m)
ZUVA 05: Paro
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaTatanghang Monastery (kusvika 5 maawa masikati kufamba rwendo rwendo). Icho chiri chimwe chezvinyanya kuzivikanwa zvezvivako zvemuzinda weBhutan, zvakagadzirirwa kurutivi rwechikepe 900m pamusoro pemupata weParo pasi. Zvinonzi guru Rinpoche rasvika pano kumashure kwekanyori uye akafungisisa pane imwe imba yevatongi uye naizvozvo inonzi 'Tiger's Nest'. Nzvimbo iyi yakaratidzwa senzvimbo tsvene uye yakashanwa naShabdrung Ngawang Namgyal mu1646 uye zvino yakashanwa neBhutanese kamwechete kamwe munguva yehupenyu hwavo.
Mushure memangwanani emangwanani, kutyaira kuenda kuChelela pass.
Chele la (kupfuura), pakakwirira 3,988 mamita inofungidzirwa kuti ndiyo imwe yepamusoro yepamusoro inofamba muBhutan. Panenge motokari yeawa imwe mumugwagwa une miti yakawanda, iyi Pasi-yeparadhiso yeparadhiso. Iyi inopa maonero anoshamisa egomo dzvene Jomolhari naJichu Drake. Iyo inoratidzwawo nemazana eminamato miregi inoputika mumhepo. Pano, vashanyi vanoona mazhenje emasango omusango, ruvara rwepepuru uye ruvara rwemucheka, uye kusvetuka kwepakati yebhuruu iris yakafukidza musango pasi. Nzvimbo yepamusoro yepass bloom ne rhododendrons mumarudzi akasiyana-siyana-pombi yakachena, yakadzika pink, yakatsvaira machero, mauve, machena uye tsvuku.
Gare gare ari munzira yekuenda kuDhuongdrakhaGoempa. Kazhinji inonzi mini Takstang, Dzongdrakha igomba-kurutivi rwetemberi rakaoma kumadokero kweParo Valley. Zvifananidzo zvina zvinoumba zvakaoma, zvakatsaurirwa kuna Drolma (Tara), Tsheringma (Mwarikadzi wemakore mazhinji), Guru Rinpoche uye Buddha weMangwana, Maitreya. Munharaunda yemitemo inotaura kuti Guru Rinpoche paakatanga kusvika kuBhutan, akauya kubva kuNepal, achisvika kuDakarakar, uye ipapo Dzongdrakha asati asvika kuTatanghai (Tiger's Nest) nechekuchamhembe kusvika kumupata. Iri pedyo ne20 motokari yemaminiti kubva kuParo, temberi idzi dzakavakirwa padenga riri pamusoro pemusha weBondey asi kufamba hakusi kwakanyanya sezvakaita Taktshang.Pamugwagwa, zvinotora chete mamiriyoni 30 kufamba kusvika pano, kuburikidza nemasango e rhododendron nemouki miti ane mbongoro chena pairi. Dzongdrakha anowanidza gore negore Tshechu (mutambo) unoitika zuva rakatevera uye zuva rakatevera ParoTshechu guru rakaitwa paRinpungDzong pedyo neguta guru. Panguva yemutambo kuZuzdrakha, chimwe chezvikomborero zvikuru zvinoitika apo yakagamuchira (stupa) yeBuddha yakapfuura yakazarurwa kuitira kuti vateereri vakakomborerwa nemasitori akaitwa mukati. Guta reZuzdrakha rine ma tempile akawanda uye rinozivikanwa nevakawanda vevarume vavo vachigadzwa zvakakwana madamoni kana gomchens (vakaisa madamoni vasingatori mhiko dzekushaya chibharo). Zvinoshamisa ndezvokuti vakadzi vari kushanda muminda uye ivo vanogamuchira chingwa havakwanisi mune imwe nharaunda yenyika.
Masikati manheru kuenda kuDrukgyelDzong, nhare yakakoromoka umo varwi veBhutan vakarwa neTibetan mazana emakore akapfuura. Ichando chine dome chetsvene Chomolhari, "gomo ramwarikadzi" rinogona kuonekwa mukubwinya kwaro kose kubva kumugwagwa unoenda kuDhuong.
Vari munzira, fambai muzana remakore re7th KyichuLhakhang, rimwe rematemberi e108 akavakwa muHimalaya neTibetan King, SongtsenGampo. Icho chivako chetemberi ino chinoratidza kuiswa kweBuddha muBhutan.
Madekwana kuongorora kunofamba-famba vachitenderera mumugwagwa mukuru uye mumisika.
ZUVA 06: Ibva Paro
Mushure mekudya kwekudya kwekutanga pahotera, endai kunhandare yendege kuenda kune imwe kuenda. Mumiririri wedu achakubatsira nekunyoresa maitiro uye anokukumbira kuti uende.
MAZUVA OKUTSVIRA MAMWE MAKORE ACHINYORWA MUI ITINERARY:
• Ta Dzong - Paro (musamu wenyika): yakavharwa neHurumende dzeHorozi
• National Library - Thimphu: yakavharwa musi weSvondo, Zuva neZvizororo zvehurumende
• Textile Musuem - Thimphu: Yakapfigwa neHurumende mazororo & neSain. Pa Sat yakazaruka kubva ku9.00 kusvika ku4 pm
• Institute of Zorig Chusum (Chikoro & Arts School) - Thimphu: Yakapfigwa neZuva neHurumende dzezororo. Pa Sat yakazaruka kubva ku10 kusvika ku12 o'clock. Uyewo yakavharwa munguva yechando / yezhizha (Dec-kutanga March, June-Aug - Gwaro rekuvhara rinowanika masvondo mashomanana zvisati zvaitika).
• Zvisiri Bhutan - Thimphu: Yakapfigwa nezuva neHurumende dzezororo
• Ta Dzong - Trongsa: yakavharwa musi weSvondo uye paHurumende dzezororo
• Taktsang Monastery (Nechirwe yeTiger) - Paro: Yakavharwa Tambo
(Iyi yemazuva ano inoshandiswa pamashoko ekuvhara / ekuzarura inoshandiswa kuchinja maererano nemutemo weGovt)